रेखा थापा को जिवन गवाही येशूमा नै सबै समाधान । – Shalom Nepal
रेखा थापा को जिवन गवाही येशूमा नै सबै समाधान ।
Posted on July 19, 2020 July 19, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
जय मसीह साथै नमस्कार।
रेखा थापा : मेरो नाम रेखा थापा हो । मेरो घर धादिङ जिल्ला, सल्यानकोट गा. बि. स. हो । आज म मेरो वास्तविक जीवन गवाही बताउन गैरहेको छु ।अथार्त मैले कसरि प्रभुलाई पाए र प्रभुले मेरो जिवनमा गर्नुभएको कामहरु बताउन गइरहेकोछु।
कुरा २०७२ साल तिरको हो, भूकम्पले सिंगो देश नै त्रासमा थियो। सबै मानिसहरु अतल्लिएका थिए। कत्ति बेला के हुन्छ ? कसैले केहि सोच्नै सकेका थिएनन। गाँस, वासको कसैको ठेगान थिएन । नत आराम संग सुत्न सकिन्थ्यो। त्यो काहाली लाग्दो क्षणलाइ समझदा पनि अंगनै जिरिङ्ग हुन्छ। अनि भर्खरै यस्ता जटिल परिस्थितिलाई पार गरे संगै मेरो जिबनमा अर्को ठुलो बज्रापात पर्यो। भुकम्पको महाकाल पश्चात मेरो शरीरभरि चिलाउने खटिरा आयो। अनि धेरै पटक अस्पताल धाए अनि धेरै औषधि पनि खाए तर पनि निको भएन। पैसा धेरै नै खर्च भयो तर मेरो घाउ दिन-दिनै बढ्दै गयो। हुदा हुदा यति सम्मकी मेरो मुख भरि भएर केहि खान समेत भएन। त्यतिबेला हाम्रो परपरागत विश्वास अनुसार धामी, झाक्रीलाई पनि देखाउन गए उनीहरुको पनि केहि सिप लागेन। अवस्था गम्भीर हुदैगयो, मेरो यस्तो दर्दनाक अवस्था देखेर परिवार, छिमेकी सबै आत्तिसकेका थिए।
अब कुनै विकल्प छैन भनेर हामी सबै निराश भयौ।
एकदिन मेरो छिमेकी आएर भन्नु भयो कि तिमीहरु चर्च गयौ भने निको हुन्छ भनेर अनि हामी संग अरु विकल्प नभएको कारण चर्च जाने निणर्य गरियो र हामी चर्चमा गयौ। पास्टर बा लगाएत त्यहाँ रहनु भएका सबैले प्रार्थना गरिदिनु भयो। सबैले धेरै नै वास्ठा गर्नुभयो। अनि दिनानु- दिन मेरो घाउ पनि निको हुदै गयो। त्यही समयमा नै मैले येशूलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरे। तर मेरो परिवारहरुले गर्नु भएन। म प्रभुमा बढ्दै गए, मेरो रोग पनि निको हुँदै गयो। यत्तिकैमा फेरी मलाई सतावटहरु आउन थाल्यो। म चर्च गएको देखेर आफन्तहरुले घृणा गर्न थाल्नु भयो छिमेकीले गाली गर्नथाल्नु भयो। यो सानो जातले मान्ने धर्म हो। रितिरिवाज केहि पनि नमान्ने गाइ खाने धर्म हो भन्न थाल्नु भयो। हुँदा-हुँदा आफ्नै परिवारहरुले सम्म घृणा गर्न थाल्नु भयो। केहि समय पछि मेरो ममी, बाबाको झगडा हुनथाल्यो। अन्तत बाबाले हामि सबैलाई छाडेर कहिल्यै घर नफर्कने भनेर घरबाट निस्कनु भयो। घरको मुख्य मान्छे जो हामी सबै उहामा आश्रित थियौ, उहाँनै नहुदा हामी सबै बिचल्लित भयौ।
बल्ल बल्ल परिवारमा खुसि आउन लागेको थियो त्यै पनि फेरी निराश भयो। फेरी ममी, म चर्चमा गयौ र बाबाको लागि सबै मिलि प्रार्थना गर्यौ । प्रार्थनाको सुनुवाई तुरुन्तै भयो, बाबा ३ दिनमा नै घर फर्कनु भयो उहाँ संगै हाम्रो खुशी पनि फर्कियो, अनि हामी स-परिवारले परमेश्वोरलाई पायौ। र अहिले हामी सबै जना खुशी साथ उहाँलाई महिमा दिन्छौ।
यसरी हामिले प्रभुलाई पायौ प्रभु नपाउदा सन्सार को ढाचा मा चलेर समस्या समाधान भएन तर प्रभु लाई जीवनमा अपनाएपछी खुशी नै खुशी छाएको छ प्रभुमा केही कुरा असम्भव छैन हामिले विश्वास गरेर प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्यो भने उहाँले हाम्रो जिवनमा अचम्मका काम गर्नुहुन्छ। तपाईं पनि प्रभुमा विश्वास गर्नुहोस् र अनन्त जीवन पाउनुहोस् ।
–रेखा थापा छेत्री
बाटोमा बसेर पनि संगति गर्यौ ( सार्है मन छुने जीवन गवाही ) – अस्मिता दाहाल
Posted on May 16, 2020 May 16, 2020 Author Shalom Nepal
जयमसिही,म अस्मिता दाहाल [हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ , म तिमीहरुलाई विश्राम दिनेछु,(मात्ति ११ : २८ )]। यस वचन ले मलाई सान्त्वना दिएको छ ।मेरो जन्म इंडियाको खलफेङ्ग भन्ने ठाउमा भएको थियो । मेरो परिवारमा दुइ आमा र बुबा अनि ६ जना दाइहरु र म एक छोरी गरेर हामी दश […]
सेवा गर्न तालिम दिनुहोस् ।